Iindaba -Uyigcina njani intloko yomshicileli ngokufanelekileyo?
Uyigcina njani intloko yomshicileli ngokufanelekileyo?
Njengeyona nto iphambili kumatshini wokushicilela we-inkjet, uzinzo lwentloko yokuprinta ngokungathanga ngqo kumisela umgangatho womatshini. Xa iindleko ezisisigxina zentloko eprintiweyo ziphezulu kakhulu, ungabandisa njani ubomi benkonzo yentloko eprintayo, ukunciphisa iindleko zokutshintsha kunye nenqanaba lokunxiba, kunye nokugcina intloko ngokuchanekileyo. Kubalulekile kwiivenkile zentengiso kunye nabasebenza ngokuqhubekeka! Wonke umntu akaqhelekanga ukuba aprinte iintloko.
Njengeyona nto iphambili kumatshini wokushicilela we-inkjet, uzinzo lwentloko yokuprinta ngokungathanga ngqo kumisela umgangatho womatshini. Xa iindleko ezingaguqukiyo zentloko yokuprinta iphakame kakhulu, ungabandisa njani ubomi benkonzo yentloko eprintayo, ukunciphisa iindleko zokutshintsha kunye nenqanaba lokunxiba, ulondolozo olusengqiqweni lwemibhobho yomatshini wokushicilela we-inkjet ibaluleke kakhulu kwiivenkile zentengiso kunye nabaqhubi bokulungisa!
I-inki yomatshini wokushicilela we-inkjet
I-inki kunye nomlomo yimibandela emibini ephambili yokuprinta okuqhelekileyo komatshini wokushicilela we-inkjet kunye nemveliso ezinzileyo yomfanekiso. Ezi zibini ziyasebenzisana kwaye zibalulekile. Ke ngoko, ukugcina umlomo ngowona mmandla uphambili wokuprinta, kukho iimfuno ezithile zomgangatho we-inki kunye nendlela yokusebenza yomatshini wokuprinta we-inkjet.
1.Ukuthintela ukuxubana: Zininzi ii-inki brand kwimarike, kunye nokwenziwa kwe-ink solvent eyenziwe yinkampani nganye yahlukile. Ukuxutywa kweentlobo ezahlukeneyo kunye neebhetshi ze-inki kuyenzeka ekuphenduleni kweekhemikhali, ezinokubangela ukuba umbala uphonononge kunye nokulahleka kombala, kwaye kubangele imvula ibambe umlomo, ke akuvumelekanga ukuxuba ii-inki zangaphakathi nangaphandle nee-inki zeemveliso ezahlukeneyo.
Sebenzisa umgangatho ongaphantsi ngononophelo: I-inki engaphantsi ayikho kumgangatho wokutyibilika kunye nokuncipha, okuya kuchaphazela isiphumo sokugqibela sokuzoba kunye nokungeniswa komyalelo. Amasuntswana amakhulu e-pigment anokuwutshisa ngokulula umlomo kwaye abangele ukunxiba kunye nokusetyenziswa okusisigxina, ke musa ukurhalela ubuncwane beinki engaphantsi, kuba ilahleko encinci ayikufanelanga ilahleko.
3.Khetha eyokuqala: Kungcono ukhethe i-inki yoqobo yomenzi wokushicilela we-inkjet, ovavanywa ngokusisiseko ngovavanyo kunye nokusetyenziswa kwexesha elide. Iyahambelana nentloko eprintiweyo yomatshini wokushicilela we-inkjet kwaye izinzile kwaye ithembekile. Umenzi unikezela ngesiqinisekiso sexesha elide emva kwentengiso. Yeyona khetho ilungileyo kwi-inki yomatshini wokushicilela we-inkjet.
Umsebenzi wokushicilela we-Inkjet
Ukucima kunye nokutywina: Emva kokugqiba umsebenzi womatshini wokuprinta we-inkjet, qinisekisa ukuba intloko yokuprinta kunye nokufakwa kwe-inki kudityaniswe ngokuqinileyo ukwahlula umoya kunye nokuthambisa ngokupheleleyo intloko yoshicilelo ukunqanda ukuvaleka kwentloko eprintiweyo.
Ukukhuselwa kwamandla 2: Ngaphambi kokuba ubeke endaweni yamalungu okanye wenze ulondolozo kumatshini wokuprinta we-inkjet, khumbula ukuba umatshini wokuprinta we-inkjet kufuneka ucinywe. Musa ukufaka okanye ukuhlahlela ngokuthanda kwakho.
Ukususwa kwezinto zangaphandle: Ngaphandle kwamaphepha okusetyenziswa, akuvumelekanga ukubeka ezinye izinto zangaphandle kwiqonga lokuprinta lomatshini wokuprinta i-inkjet, oya kuthi wenze umonakalo kumbhobho ngexesha lokuhamba.
4. Thintela umbane ongagungqiyo: Gcina izinto ezisetyenziswayo ngokufanelekileyo ukuthintela ukukhuhlana kunye nokuveliswa kombane. Umatshini kufuneka uqhagamshelwe emhlabeni ngaphambi kokusetyenziswa, kwaye iiglavu zokuzikhusela kufuneka zinxitywe xa uchukumisa umlomo.
5.Ulondolozo: Ukuba intloko eprintiweyo yaphukile, qala ubone ubukhali bayo, emva koko usebenzise indlela ehambelanayo ukuyisombulula. Yenze kancinci ngexesha lokucoca. Musa ukunyanzela inaliti ukuba yenze umonakalo osisigxina kwintloko eprintiweyo.
1.Ukushisa kunye nokufuma: nika ingqalelo kubushushu kunye nokufuma okujikeleze umatshini wokuprinta we-inkjet. Amaqondo obushushu yi-15-30 degrees, kwaye ukufuma kuphakathi kwama-40% -60%. Ukuba okusingqongileyo akuhlangabezani neemfuno, unokumisela ii-air conditioner, izixhobo zokumisa izixhobo, izixhobo zokumisa iinwele kunye nezinye izixhobo Ukuphucula imeko yokusebenza.
2.Uzinzo lweVoltage: Kwiindibano zocweyo zokuqhubekeka izixhobo ezikhulu, kuyacetyiswa ukuba kumiselwe amandla ombane wokuqinisekisa amandla ombane ngexesha lomsebenzi womatshini wokuprinta we-inkjet, ukuze umatshini wokushicilela we-inkjet ube iveliswe yaza yaqhubekeka ngokuzinzileyo.
3.Reduce uthuli: Ekwindla, imozulu yomile, inomoya kwaye ayina mvula inganokubangela ngokulula umoya, isanti nothuli. Ukungena ngaphakathi ngaphakathi akulunganga. Uthuli lungena emilonyeni, ebhodini nakwinxalenye yomshicileli, lubangele ukuphazamiseka kombane okumileyo kunye nokuvala umlomo. Ke ngoko, thabatha amanyathelo afanelekileyo. Amanyathelo okukhusela ayimfuneko kakhulu.
Inkampani ye-Yinghe ibonelela ngeentlobo ngeentlobo zentloko yePrinta engeniswayo, enje nge-Epson, HP, Canon, Muto, Ricoh, Xaar, njl., Noqinisekiso lomgangatho, i-100% yokungenisa iimveliso ezintsha, kunye nenani elikhulu ngesaphulelo.